Marvel waxay muujineysaa astaanta cusub ee loo yaqaan 'X-Men' ee aan arki doonno xagaagan | Abuurista khadka tooska ah
Ma joojinayno sii wad tirinta wararka la xiriira astaamahan cusub kuwaas oo isku dayaya inay u keenaan dareemo cusub noocyada, adeegyada, alaabada iyo xitaa majaajillada shirkadaha caanka ah ama kuwa kale ee waqti badan ku bixiya helitaanka suuqooda.
Maanta taas waan ognahay Marvel ayaa shaaca ka qaaday astaan ​​cusub oo loogu talagalay X-Men iyo inuu isagu u sameeyay inuu furo bog cusub oo ka mid ah taxanaha majaajillada. Qaar ka mid ah X-Ragga kuwaas oo ku jira qaab aad u fiican iyo in Marvel uu waday tan iyo markii ugu horreysay bilawgii 1963.
Waxa kaliya ee leh guul shaashadda weyn waxay ka dhigtay xitaa mid caan ah oo caan ah. Marvel waxay go'aansatay inay ahayd waqtigii la siin lahaa astaanta taabasho wanaagsan oo leh naqshad cusub oo ku calaamadeysan calaamaddaas oo leh X oo ku hareeraysan wareeg wanaagsan oo ballaadhan oo qaababkeeda ah.
Waa tan naqshadayda cusub ee X ee loogu talagalay @Jickywaa cusub @ Cajiib #HouseOfX iyo #PowersofX taxane lagu dhawaaqay at # C2E2-https://t.co/4rHEoLvo4Z
Adaa mudan. pic.twitter.com/YIWPMYSfFQ
Astaan ​​cusub oo uu abuuray agaasime hal abuur leh iyo naqshadeeye garaaf ah Tom Muller kaasoo dhawaan soo saaray naqshada astaanta si uu uga muuqdo "House of X" iyo "Power of X". Laba arrimood ayaa loo sii dayn doonaa khaanadaha xagaagan.
Waxaan ka wada hadalnay dhowr majaajilo oo noo horseedaya a taxane mini degay dib-u-cusbooneysiin cusub oo xayeysiis ah oo lala yeeshay qoraaga Jonathan Hickman iyo farshaxanada Pepe Larraz, RB Silva iyo Marte Gracia.
Maxaa ka duwan tan astaan ​​cusub oo loogu talagalay X-Ragga hadaan isbarbar dhigno midda loo sii daayay Justice League usbuucii la soo dhaafay, ayaa ah inaysan ku saleysneyn jaangooyooyinka waxa taxanahan majaajillada noqon lahaa. Waxay ku salaysnayd mid ka mid ah astaamaha astaanta u ah Ragga oo taasi wax ka badan ama ka yar ma aha X-daas caanka ah. Hab xiiso leh oo loogu dhajiyo naqshadeynta ragga-X.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Kani waa astaanta cusub ee loo yaqaan 'X-Men logo' oo ay soo saartay shirkadda 'Marvel'